DOWNLOAD KOREL DRAW 2017 PROGRAM FOR FREE 19.1.0.434 - MMEMME NYOCHA - 2019
Mgbe ị na-arụ ọrụ na BluStaks, ndị ọrụ nwere oge nsogbu. Usoro ihe omume ahụ nwere ike ịjụ ịrụ ọrụ, kwụ. Amalite nbudata oge na-adịghị mma. Enwere ọtụtụ ihe kpatara nke a. Ka anyi gbalịa idozi nsogbu ndi ahu.
Dozie nsogbu na-agba BlueStacks
Lelee ntọala kọmputa
Ya mere gịnị mere BlueStacks anaghị arụ ọrụ? Ọ bụrụ na mmemme ahụ amaliteghị mgbe echichi, mgbe ahụ ọ ga-abụrịrị na ezughị usoro ihe omume.
Iji rụchaa ọrụ ahụ, BlueStacks chọrọ 1 gigabyte nke RAM na-ejighị ya. Na diski ike, ị ghaghị ịnweta freebytes free 9 dị mkpa iji chekwaa faịlụ mmemme. Nhazi ahụ ga-abụ ma ọ dịkarịa ala 2200 MHz. Ngalaba nke kaadị vidiyo dịkwa mkpa, ọ ghaghị akwado OpenGL site na 2.0.
Ị nwere ike ịlele ntọala gị wee jiri ha tụnyere ntọala maka ịwụnye emulator, na ngwaahịa nke kọmputa gị. Ọ bụrụ na afọ gị agaghị eru nke kachasị, usoro ahụ agaghị arụ ọrụ. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịwụnye emulator ọzọ, na-enweghị ihe dị mkpa.
Ilele ndị ọkwọ ụgbọala ahụ awụnyere
Ọzọkwa, a ghaghị itinye ndị ọkwọ ụgbọala niile na usoro. Onye ọkwọ ụgbọala na-efu ma ọ bụ nke a na-apụ apụ nwere ike igbochi nkedo na ọrụ BlueStacks. Meghee "Onye njikwa ngwaọrụ", na "Ogwe njikwa" ma lee ọnọdụ nke ngwaọrụ.
Download ma melite onye ọkwọ ụgbọala ahụ nwere ike ịnwe na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ngwaọrụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịnwe profaịlụ Intel, gaa na saịtị Intel wee chọọ software dị mkpa n'ebe ahụ.
Chekwaa ebe nchekwa
Ọ bụghị obere ajụjụ nke ndị ọrụ: "Gịnị mere na ọ bụghị Bluustax ibu, bụ na-ebighebi ebighi ebi?" Ihe mere nwere ike ịbụ otu ihe ahụ na akpa ikpe. Enwere nhọrọ na RAM zuru ezu, ma mgbe ị na-agba ọsọ ndị ọzọ, ha na-ebudata ya na BlueStax freezes.
Lee ebe nchekwa na Manager Windows Task. Ọ bụrụ na agbanyeghị ebe nchekwa ahụ, kwụsị usoro ntinye ọ bụla ị na-ejighị.
Ntinye nkwekọrịta Antivirus
Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme na nje virus na-egbochi ọrụ nke emulator. Ọtụtụ mgbe, nke a na-eme ma ọ bụrụ na ịdọtaghị na BluStaks site n'aka onye ọrụ gọọmentị. Ngwa ngwa nke sitere na isi iyi nwere ike ime ka enweghi afọ ojuju na nchebe antivirus.
Mbụ ị ga-achọ itinye usoro emulator na ihe ndị ọzọ. Na usoro nke ọ bụla, usoro a na-eme n'ụzọ dịgasị iche iche. Iji mepụta ndepụta dị otú ahụ na mkpa Microsoft, gaa na taabụ "Nhọrọ", "Nkwekọrịta ndị a jụrụ". Na windo na-esote anyị na-ahụ usoro nke mmasị ma tinye ha na listi.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ghaghị ịmaliteghachi emulator ahụ, mgbe ọ gwụchara usoro ya niile na njikwa ọrụ.
Ọ bụrụ na ọ dịghị ihe gbanwere, gbanyụọ antivirus kpamkpam. Ọ bụghị nanị na-erepịa ihe onwunwe, ma ọ pụkwara igbochi ọrụ nke emulator.
Ọzọkwa, nbudata na-aga n'ihu mgbe ọ na-enweghị njikọ Ịntanetị maọbụ na ọ dị ala. Enweghị mgbanwe ọ bụla n'usoro ihe omume ahụ. Emulator ga-achọta njikọ Ịntanetị dị na ya n'onwe ya. Ọ bụrụ na ọ bụ Wi-Fi, weelee Internet na ngwaọrụ ndị ọzọ. weghachite router.
Kwupu njikọ ikuku ma jikọọ na USB. Gbalịa ịlele njikọ na ngwa ndị ọzọ.
Full Uninstall BluStaks
Ọ na - eme na Bluztaks adịghị arụnyere na nke mbụ, mgbe ahụ enwere ohere na enwere faịlụ ndị fọdụrụ mgbe ha wepụsịrị mbipute gara aga.
Wepụ emulator kpamkpam, ị nwere ike ime nke a site n'enyemaka nke mmemme mmemme pụrụ iche. Dịka ọmụmaatụ, CCleaner. Gaa na ngalaba "Ngwaọrụ", Unistall. Họrọ emulator BlueStacks ma pịa Unistall. Mgbe i wepụsịrị ma weghachite kọmputa ahụ, ịnwere ike ịtinye emulator.
Ịwụnye ụdị dị iche iche nke emulator
M na-ezutekarị na ụfọdụ nsụgharị emulator na-agba ọsọ n'otu kọmputa. Tinye okenye BluStaks. Ọzọkwa, ịnwere ike ịnwale ịmegharị usoro na emulator, ọ bụ ezie na nke a anaghị enye aka.
Ihe na-emekarị nke njehie mmalite nke BluStacks bụ nrụnye na-ezighị ezi. Site na ndabara, emulator setịpụrụ "C / Programm Files". Nke ahụ ziri ezi, ọ bụrụ na ị nwere Windows 64-bit. N'ihe banyere usoro 32-bit, a kacha arụ ọrụ ahụ na folda ahụ "C / Programm Files (x86)".
Ịmalite ọrụ BlueStacks na usoro ntuziaka
Ọ bụrụ na ọ nweghị nke nhọrọ nyere gị aka, gbalịa ịbanye na. "Ọrụ"chọta ebe ahụ Ọrụ BlueStacks Android Service ma tinye nkedo na usoro ntuziaka.
Kwụsị ọrụ ma malite ọzọ.
A na-edozi nsogbu ahụ n'oge a, ọ nwere ike ịnwe ozi njehie ọzọ, nke dị mfe iji chọpụta ihe kpatara nsogbu ahụ.
N'ozuzu, e nwere ọtụtụ ihe mere BlueStacks ji ewe ogologo oge iji kwụọ ụgwọ ma ọ bụ na anaghị arụ ọrụ ma ọlị. Malite na-achọ nsogbu na ntọala usoro, nke a bụ ihe kachasị kpatara nsogbu emulator niile.
Njehie nchịkọta na-ezighị ezi na gam akporo
Dekọọ vidiyo site na ihuenyo na gam akporo
Ihe nkiri vidio maka gam akporo
Ngalaba VPN kachasị elu maka ihe nchọgharị Google Chrome
Nyefee MP4 na 3GP n'ịntanetị
Ọnọdụ modem bụ akụkụ pụrụ iche nke iPhone nke na-enye gị ohere ịkekọrịta netwọk Ịntanetị na ngwaọrụ ndị ọzọ. N'ụzọ dị mwute, ndị ọrụ na-echekarị nsogbu nke mberede nke ihe omume a. N'okpuru ebe a, anyị ga-eleba anya iji dozie nsogbu a. Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na modem okpu na iPhone Iji mee ka ọrụ ọrụ nkesa Ịntanetị rụọ ọrụ, a ghaghị ịbanye na iPhone. GụKwuo